Fondamentalisma kristiana - Wikipedia
Ny fondamentalisma kristiana dia firehana ara-pivavahana izay manohana ny fivoasana hentitra sy ara-bakiteny ny Soratra Masina kristiana, izany hoe ny Baiboly kristiana, izay hita indrindra ao amin'ny protestantisma. Ny teny hoe fondamentalisma, amin'ny ankapobeny dia midika fifikirana hentitra loatra amin'ireo foto-pampianaranan'ny sehatra iray tsy amim-mpandanjalanjana, na ara-pivavahana izany na amin'ny sehatra hafa ivelan'ny fivavahana. Fihetsiketsehana mpitahiry ny fampianarana mahazatra hatramin'ny fiandohan'ny pritestantisma ny fondamentalisma, izany dia niseho tany Etazonia tamin'ny faramparan'ny taonjato faha-19.
Tamin'ny faritra ambanivohitra, indrindra tany Kalifornia sy tany amin'ireo fanjakana atsimo, tany Etazonia no nahazo vahana ny fondamentalisma teo anelanelan'ny taona 1920 sy 1930. Ny zava-boalazan'ny Baiboly dia noheverina fa marina mihoatra noho ny voka-pikarohan'ny taranja siansa sy ara-tantara. Niteraka fandrarana ny fampianarana amin'ny sekolim-panjakana ny petra-kevitra manohana ny fivoarana miandalan'ny zava-manana aina (fa tsy ny famoronana) izany tao amin'ny fanjakana maro tany Etazonia. Izany ohatra no zava-nitranga tany amin'ny fanjakan'i Tennessee ao Etazonia, izay nitondrana mpampianatra iray (i John Thomas Scopes) teo amin'ny fitsarana noho izy nampianatra ny amin'ny fivoaran'ny zavam-manana aina izay heverina fa mifanohitra amin'ny voalazan'ny Baiboly sady mifannohitra amin'ny lalàn'io fanjakana io. Na dia tsy maro mpanarfaka aza ny fondamentalisma dia tsy nitsaha-nitombo ny mpomba azy hatramin'izay, sahala amin'ny evanjelisma, mba hanoherany ny firehana teolojika taty aoriana.
Araka ny fampianaran'ny fondamentalisma dia ireto ny fototry ny fivavahana kristiana: ny tsy fisian-diso ao amin'ny Baiboly, ny maha virjiny an'i Maria, ny maha Andriamanitra an'i Jesosy, ny sorona nataon'i Kristy ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana mba hanavotana ny olombelona amin'ny fahotany, ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty, ny fiavian'i Kristy fanindroany, ary ny fitsanganan'ny mpino amin'ny maty. Ireto ny zavatra toheriny: ny teolojia vaovao misy fitsikerana araka ny fomba siantifika ny lahatsoratry ny Baiboly, ny petrakevitra ara-tsiansa ny amin'ny fivoara-miandalan'ny zava-manana aina, ny fanomezan-danja tafahoatra ny olombelona, ary ny ekiomenisma.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fondamentalisma_kristiana&oldid=980933"
Dernière modification le 21 Martsa 2020, à 21:55